Izithuba Ezincinci | May 2022
Iingcamango ezingama-26 zeGumbi lokuPhila elincinci -Ulihlobisa njani iGumbi lokuPhila elincinci
Ukuba igumbi lakho lokuhlala elincinci lixinekile, into yokugqibela ofuna ukuyenza kukujinga phaya. Yenza indawo yakho ibonakale inkulu kunokuba injalo ngobuqhinga bokuyila.
Iingcamango ezingama-46 zeZindlu zangasese eziNcinci-iZisombululo zoYilo lweBhafu encinci
Sombulula iingxaki zakho zesithuba esincinci ngezi zimvo zincinci zangasese.
Iingcamango ezingama-50 zeGumbi lokuhlamba iimpahla - Igumbi lokuCoca igumbi lokuCoca iingcebiso
Ukuba ikhaya lakho alisikelelwanga ngegumbi elikhulu lokuhlamba iimpahla, ungakhathazeki. Ezi zimvo zegumbi-ezineengcebiso zokugcina ezakhelweyo-ziya kukunceda wenze uninzi lwezinto onazo.
Iitafile zekofu ezingama-25 eziGciniweyo eziGciniweyo-eziPhambili zeZimbo eziPhezulu zeTafile zekofu
Ukuba ufuna ukucofa indawo yokugcina eyongezelelweyo kwigumbi lakho lokuhlala, zama enye yeetafile zekofu kunye nokugcinwa okufihliweyo, kubandakanya iitafile zekofu zokuphakamisa, iitafile ezivelayo, kunye nemfihlo, iidraw ezifihlakeleyo.
Iingcamango ezi-19 zoMbutho oNcinci weCloset-Iingcebiso zokuGcina iiVenkile ezincinci
Endaweni yokusika ingqokelela yengubo yakho kwisiqingatha, sebenzisa ezi ngcebiso zincinci zincinci kunye nemibono evela kwiingcali ukwenza indawo ephindwe kabini kunangaphambili.
Ungayihombisa njani indlu yakho yokuqala -Igumbi lokuQala eliGqwesa iiMbono
Ezi zinto ziyimfuneko yokuhombisa zizinto ozifunayo kwigumbi lakho lokuqala. Nazi iingcebiso ezingama-20 zokunceda uqiniseke ukuba indawo yakho ijongeka ngathi ikhulile, kodwa iyonwabisa kwaye iphilile.
Iingcamango ezingama-60 eziCwangcisiweyo zoYilo lweKhitshi- IziCombululo zeKhonkco kwiiKhitshi ezincinci
Ukuba nekhitshi elincinci ayisiyongxaki-kukuba nekhitshi elixineneyo elizokuphambanisa. Ezi ngcamango ziya kwandisa ukusebenza kwendawo yakho.
I-21 Tricks yokuGcina uBuhle kumagumbi okulala amancinci
Ukusuka ekujikeni udonga ngasemva kwebhedi yakho kwigunjana ukongeza into elula njengedonga elinyusa udonga, siqokelele ezona ndlela zilumkileyo zokusebenzisa le ndawo unayo.
Iingcamango zeGumbi lokuDlela elincinci-Uyilo lwamaNgcaciso okwenza uninzi lweGumbi lokuDlela elincinci
Zama la maqhinga okuhombisa kunye nemibono yokwenza uninzi lwegumbi lakho lokudlela elincinci.
I-17 Eyona Mibala Ipeyinti kumagumbi amancinci-Iingcebiso zePeyinti kwiiNdawo ezincinci
Ngelixa umhlophe lukhetho olucacileyo kumbala wepeyinti omncinci, ayisiyiyo kuphela ukhetho. Ukusuka kwisibindi ukuya ekukhanyeni, le yeyona mibala mihle yendawo encinci.
Iingcamango ezingama-30 zoLwakhiwo lokulala okuNcinci- Indlela yokuHombisa igumbi lokulala elincinci
Yenza uninzi lwegumbi lakho lokulala elincinci ngezi zinto zingamashumi amathathu zokuhombisa kunye nokuyila kunye nemibono yoyilo.
Izityalo ezili-15 eziGqwesileyo kwiiGadi ezincinci
Zeziphi ezona zityalo zilungileyo kwiigadi ezincinci? Ezi zezona zintle zihlala ixesha elide, izihlahla ezihlala ziluhlaza, abakhweli, iibhalbhu kunye nemithi emincinci yegadi encinci.
Ungayihombisa njani iAudio yeNdlu- Iingcamango ezingama-28 zeNdlu yeeNdlu
Ezi zimvo zingama-28 zezitudiyo ezikrelekrele kunye neengcebiso ziya kwenza kube lula kwaye kube nesitayile ukuhlala kwigumbi elinye leemultimensional.
Iingcamango ezingama-21 zeNdlu eNcinci yokuYila ngaphakathi-Indlela yokuHombisa indawo encinci
Nokuba uhlala kwigumbi lokufundela okanye ufuna ukufumana okungakumbi kwigumbi elincinci, ezi zimvo zincinci zoyilo lwesithuba ziya kusindisa ubomi bakho.
Izindlu ezili-10 ezincinci ezinamavili-Amakhaya aPhathekayo kunye neenqwelwana
Iikharavani ezintle, iinqwelwana ezirhuqwayo, kunye namakhaya amancinci anokukhetha kwaye ahambe apho intliziyo yakho ifuna khona.
Abaququzeleli bezindlu zangasese abangama-25 abangaphantsi kwe- $ 20 - Umbono weGenius Bathroom Organisation
Akunyanzelekanga ukuba uchithe itoni yemali ukufumana indawo yokugcina engaphezulu kwigumbi lakho lokuhlambela. Siqokelele ubuhlakani kunye nabaququzeleli bezindlu zangasese ezifikelelekayo ukuzama.
Iingcamango zamaGumbi okuPhila amaNcinci- Amagumbi amaNcinci okuHombisa iiMbono 2021
Ngaba ujonge izimvo zegumbi lokuhlala elincinci? Yenza indawo yokuphupha kunye nokujikeleza kwegumbi lokuhlala elincinci lokuhombisa izimvo kunye neengcebiso zoyilo.
Itheyibhile yokutyela eNcinci: iitheyibhile zokutya ezixineneyo ezili-18, izithuba ezincinci
Iitafile ezincinci zokutya kunye nezitulo zilungile apho indawo ikwipremiyamu ekhaya. Ukusuka kumxinwa ukuya koyilo olwandisiweyo, sijikeleza ezona tafile zintle zokutyela.
I-21 yeeNdawo eziLungileyo zokuGcina amagumbi amancinci-Uyilo lweSofa seSofa
I-loveseats, i-snugglers okanye i-cuddlers ifanelekile kumagumbi amancinci kunye neendawo zokuhlala. Ezi sofas zincinci zibanzi kunesitulo setulo kodwa zincinci kunesofa esemgangathweni, zizisa intuthuzelo ebalulekileyo kunye noyilo lwangoku kulo naliphi na ikhaya.
Izindlu ezingama-68 eziGqwesileyo eziNcinci -Iingcamango zokuYila amaKhaya amaNcinci
Amakhaya amancinci ayisiyonto nje ikhangeleka intle- ziyinxalenye yentshukumo ekhulayo ekhuthaza ubomi bokugcina obuncinci.
iindonga zekhitshi eziluhlaza
amagumbi apholileyo amantombazana
imibala efanelekileyo ekhitshini
uyilo lweefenitshala yegumbi lokuhlala